Mawiricheya - 7 Zvinhu Zvaunofanira Kuziva | KarmanHealthcare.com
Ndakaita ongororo pamawiricheya uye hezvino zvinhu zvinomwe zvaunofanira kuziva.
Unofanira kutarisa nemutengesi wepanzvimbo yako kana zvasvika pamachaja ewiricheya yako yemagetsi. Vanogona kukubatsira kuona chaja yakanaka pawiricheya yemagetsi yawakatenga. Nguva dzose verenga bhuku rekushandisa usati wasvika kushandisa charger. Iwe unozoona nzira dzekuwedzera hupenyu hwebhatiri pamwe neakakosha nhungamiro yekuchengetedza yekutevera paunenge uchichaja bhatiri rako rewiricheya.
Iva nechokwadi chekutarisa nekambani yako yeinishuwarenzi usati watenga wiricheya yako yemagetsi sezvo mamwe acho achibhadhara imwe kana yakawanda yemutengo. Chiremba wako achafanirwa kukupa wiricheya yemagetsi inishuwarenzi isati yabhadhara chero mutengo.
Mawiricheya emagetsi anorema achienzaniswa neaya emanyorerwo. Kuti uite zvakanaka, bhatiri rinoda kudzoreredzwa nguva dzose.
Paunenge uchitenga wiricheya yakashandiswa, yeuka kuti inogona kunge yakagadziridzwa kumuridzi wekare uye inogona kunge isiri yako yakanyanya sarudzo. Nokuda kwezvinangwa zvenguva pfupi, yakashandiswa ingava pfungwa yakanaka, asi kana iri yokushandisa zvachose, wiricheya itsva ingava nzira iri nani. Funga nezvehuremu hwako, zvausingakwanisi, kureba, kugona uye kana uchizonyanya kuve kushandisa wiricheya mumba kana panze asati atenga kwekupedzisira. Ramba uchifunga kuti vanogadzira mawiricheya havawanzo bvumidza waranti kutamiswa. Uku ndiko kumwe kukanganisa kwekutenga wiricheya yemagetsi yakashandiswa. Kana iyo yakashandiswa mota kana mabhatiri akamira kushanda haungafukidzwe newaranti.
Unogona kuyedza mamiricheya emawoko nekungogara mukati mawo uye nekuona kuti unonzwa wakasununguka. Mazhinji ane zvigadziriso zvekuzorora kwemakumbo uye ivo vanokwanisa kugara vanhu vehukuru hwakasiyana. Iyo chigaro ndechimwe chezvinhu zvakakosha kuongorora.
Mawiricheya asingaremi ndiwo anofarirwa zvikuru uye mazhinji acho ndeemaoko, asi zvinokwanisika kuwana wiricheya yemagetsi isingaremi. Nekuwedzera kwebhatiri nemotor ivo vachave vachiremerwa kupfuura lightweight wiricheya
Kana iwe uchida kutora chikamu mumitambo yakaita setennis, basketball kana kungoita mujaho, wheelchair yemitambo isingaremi isarudzo yakanaka. Kune mumwe munhu ari kufamba, wiricheya isingaremi yakanakira kupeta nekuchengeta muhunde kana kuseri kwezvigaro zvemberi. Iwo akanakira kuenda nzendo kuenda kuzvitoro, maresitorendi, kushanyira shamwari kana mhuri etc. Havana kunyanya customizable zvichienzaniswa nemamwe wiricheya asi vari takurika zvikuru.